Wear OS dia nohavaozina amin'ny interface vaovao | Androidsis
Wear OS dia mitohy miditra an-tsena, Na dia antenaina aza fa hiova ny zava-drehetra amin'ny volana oktobra rehefa manolotra ny Pixel Watch i Google, ny finday voalohany. Toa ny fiandrasana ny fahatongavan'ity modely ity dia manavao ny rafitra fiasa ny orinasa. Izy ireo dia manao izany amin'ny interface vaovao, izay manome traikefa be mpampiasa kokoa.
Ankoatra izany, ny interface Wear OS vaovao dia manome lanja bebe kokoa ny Google Assistant sy Google Fit. Zavatra mety ho topi-maso amin'ny zavatra azontsika antenaina tsy ho ela ao amin'ny fiambenana vaovao an'ny orinasa. Vaovao inona no miandry antsika amin'ity raharaha ity?
Araka ny efa nolazainay taminao, ny interface tsara no havaozina. Ka raha manana famantaranandro mampiasa ity kinovan'ny rafitra fiasa ity ianao dia ho hitanao tsy ho ela ny fanovana tonga, satria mampanantena izy ireo fa hanome traikefa tsara kokoa. Notsorina ny lafin-javatra sasany, izay nanamora ny fampiasana azy.
1 Fandraisana vaovao ao amin'ny Wear OS
2 Fandefasana ny interface vaovao
Fandraisana vaovao ao amin'ny Wear OS
Ny fampidirana ny Wear OS dia efa nahatafiditra ny fampidirana interface vaovao, saingy toa misy fiovana bebe kokoa sy fampiasa vaovao ity fanavaozana ity. Ireo no fanovana hitantsika eo noho eo ao amin'ny pejy lehibe, izay ahitantsika sary masina vitsivitsy izay manome antsika vaovao ankehitriny. Ataon'izy ireo mahafinaritra kokoa ity menio ity raha jerena.
Saingy tsy ireo no fanovana lehibe indrindra, satria ireo dia hita amin'ny fomba fifehezana ny rafitra miasa. Mora kokoa izao ny fivezivezena ao amin'ny Wear OS. Google dia nanamarika ny fitetezana an-tariby amin'ny finday Android ary mampiditra ny lafiny amin'ny famataranandro. Noho izany, hanana fihetsika hivezivezy sy hiditra amin'ireo lahasa isan-karazany isika.
Ny fidinana avy any ambany dia hanome antsika fidirana amin'ny fampandrenesana. Miaraka amin'ny fihetsika avy any ambony ka hatrany amin'ny efijery dia afaka mahita ny fahana fampandrenesana isika. Ho fanampin'izany, hanana ny fidirana amin'ny lahasa antsoina hoe «Smart Reply» ihany koa isika, izay hahafahantsika mamaly mivantana amin'ny fipihana ny fampandrenesana.
Swipe avy any ambony dia hitondra antsika any amin'ny famantaranandro. Noho izany, fihetsika avy any ambony ka hatrany ambany dia afaka jerentsika ny kisarisary fanovana haingana, izay manampy antsika hanangona fotoana sy hanao hetsika isan'andro amin'ny famantaranandro na amin'ny telefaona (toy ny maody fiaramanidina).
Ny swipe avy any amin'ny ilany ankavanana dia mitondra antsika mankany amin'ny Google Fit. Noho izany, fihetsika avy any ankavanana miankavia. Eto amin'ity efijery ity no ahitantsika ny mombamomba ny satan'ny mpampiasa, miaraka amin'ny angona toy ny fitepon'ny fo sy ny maro hafa. Ka izany dia ho fomba tsara hahitana maso sy hahitanao haingana ny toe-batanao na ny fivoaranao.
Ny swipe avy any amin'ny ilany havia dia hitondra antsika any amin'ny Google Assistant. Nahazo laza ny mpamosavy amin'ny Wear OS. Afaka mahita ny famandrihana sy ny asan'ny mpanampy hafa amin'ny famantaranandro isika. Ny fandidiana dia hitovy amin'ny an'ny telefaona, amin'io lafiny io.
Fandefasana ny interface vaovao
Araka ny hitanao, ireo fanovana dia mampanantena fa tena miavaka amin'ny rafitra fiasa. Toa izany Google dia te hanararaotra ny fahatongavan'ny smarwatch voalohany, zavatra izay mbola tsy nohamafisin'ny orinasa mihitsy, miaraka amin'ny kinova fanavaozana ny rafitra miasa. Ary tsy mila miandry ela intsony isika mandra-pivoakan'ny fomba ofisialy ity kinova vaovao ity.
Araka ny efa voalaza, Amin'ny volana ho avy izao rehefa manomboka manavao ny fijerena Wear OS voalohany. Tsy nisy voalaza momba ny maodely iza no ho voalohany, na daty voafaritra amin'ny volana septambra amin'ny fahatongavany. Haintsika ihany ny hitranga amin'ny volana ho avy.
Ankoatr'izay, Google dia manamafy fa ireo famantaranandro mbola tsy nahazo ny Wear OS, tokony ho azon'izy ireo mivantana ity kinova vaovao ity rafitra fikirakirana. Ka toa volana vitsivitsy ho avy dia tokony hahita fanavaozana marobe amin'ny tsenan'ny smartwatch isika. Manantena izahay fa hanana fampahalalana bebe kokoa momba ireo daty izay ho avy tsy ho ela.
Ahoana ny hevitrao momba ny fiovana eo amin'ny interface ny rafitra miasa?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Google dia manavao ny interface Wear OS